Vaizvikudza vachiita zvinhu zvinosemesa mumaziso angu naizvozvo ndakavabvisa pandakazviona.
 Usave nechikwereti nomunhu kusiya chokudanana nokuti munhu anoda mumwe wake azadzisa mutemo. Mitemo inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usachive nemimwe mitemo yose inobatanidzwa yose mushoko iri rinoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.” Munhu worudo haatadziri mumwe wake. Naizvozvo rudo ndirwo runozadzisa mutemo.
 Akakombererwa zvake munhu anotirira chiedzo nokuti kana achinge akunda chiedzo anowana ngundu youpenyu yakatsidzirwa naMwari kuna vanomuda. Ngaparege kuva nomunhu anoti kana aedzwa oti, “Mwari akandipinza muchiedzo” nokuti Mwari haagoni kuedzwa nouipi. Iyewo pachake haapinze munhu muchiedzo. Asi munhu wose anoedzwa kana achitorwa mwoyo nokufurirwa noruchiva rwake. Kana ruchiva rwabata runobereka chitadzo. Kana chitadzo chadzika midzi chinounza rufu.
 Zvino mumwe wenyanzvi dzoMutemo akasvika akavanzwa vachiitirana naye nharo. Zvaakaona kuti Jesu avapindura nomazvo akamubvunza achiti, “Ko mutemo wechiposhi — poshi pane mitemo yose ndoupi?” Jesu akapindura achiti, “Mutemo wechiposhi — poshi ndouyu unoti; “ ‘Chinzwa Isiraeri, Tenzi Mwari wedu ndiye Tenzi mumwe chete oga. Uye ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nepfungwa dzako dzose, nesimba rako rose.’ “Wechipiri ndouyu, “ ‘Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.’ Hakuna mutemo mukuru pana iyoyi.”
 Kanawo mukapinda muguta ripi zvaro, vakasakugamuchirai endai mumigwagwa yaro muti; “Kunyange guruva reguta renyu rakanamatira patsoka dzedu tinorikuhumurira imi, zvakadaro zvazvo zivai izvi zvokuti umambo hwaMwari hwaswedera.” Ndinokutaurirai kuti pazuva guru rokutongwa zvichava nyore kuSodhomu pane kune guta iroro. Zvichakuwana zvako iwe Korozeini. Zvichakuwana iwe Bhetisaidha nokuti dai kuri kuti zvishamiso zvakaitwa mamuri zvakaitwa muTire nomuSidhoni, vangadai vakapinduka kare kare. Vangadai vakatopfeka masaga vakagara pamadota. Zvichava nyore pazuva rokutongwa kune guta reTire nereSidhoni panemi. Ko iwe Kapenaumu, uchasimudzirwa kudenga nhai? Uchatodzikiswa kunzvimbo yavafi. Anokuteererai anoteererawo ini; anokurambai ari kutoramba ini. Uyo anoramba ini anorambawo uyo akandituma. Vadzidzi makumi manomwe vakadzoka norufaro vachiti, “Tenzi, kunyange mweya yakaipa yava pasi pedu muzita renyu.” Asi Jesu akati kwavari, “Ndakaona Satani achiwa semheni inobva mudenga. Chionai ndakakupai simba kuti mutsiketsike nyoka namarize nokukunda simba rose romuvengi uye hapana chichakukuvadzai. Zvakadaro zvazvo musafarire izvi zvokuti mweya yava pasi penyu asi farirai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga.” Panguva imwecheteyo Jesu akafara kwazvo aina Mweya Mutsvene akati, “Ndinokutendai, Baba, Tenzi wedenga napasi kuti makavanza zvinhu izvi kuna vakachenjera navanonzwisisa mukazvizivisa kuvana vaduku. Hongu Baba aya madiro enyu akanakisa. Zvinhu zvose zvakaiswa mumaoko angu naBaba vangu. Hakuna anoziva Mwanakomana kusiya Baba kana anoziva kuti Baba ndiani kusiya kwoMwanakomana nouyo anenge asarudzwa zvake naMwanakomana kuti amuzivise kwaari.” Akazotendeukira kuvadzidzi akavataurira zvepachavo achiti, “Akakomborerwa zvawo maziso anoona zvamuri kuona. Ndinokutaurirai kuti vaporofita namadzimambo mazhinji vaida kuona zvamuri kuona asi havana kuzviona uye kunzwa zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa.” Heyo nyanzvi yomutemo yakasimuka kuti imuedze ichiti, “Mudzidzisi ndingaiteiko kuti ndiwane nhaka youpenyu husingaperi.” Jesu akati kwaari, “Ko mumutemo makanyorwa kuti kudii? Chii chaunoonamo pakuverenga kwako?” Iye akapindura achiti, munoti “Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nemweya wako wose nesimba rako rose nepfungwa dzako dzose uye ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.” Iye akati kwaari, “Wapindura zvakanaka, chiita saizvozvo, uchararama.”
 Imi varanda teererai vanatenzi venyu vapano pasi muchivaremekedza nokuvateerera zvakaperera sokunge muri kuzviitira Kristu kwete zvechipameso zvokufadza vanhu asi savaranda vaKristu muchiita zvinodiwa naMwari nomwoyo wose. Munofanira kuita basa renyu nechido sokunge muri kuriitira Tenzi kwete sokunge muri kuriitira vanhu. Zivai kuti munhu anoita zvakanaka achapiwa zvakanaka naTenzi kunyange ari muranda kana musununguki. Imi vana tenzi itaiwo zvimwechetezvo kwavari. Musavatyisidzire. Zivai kuti Tenzi wavo ari kudenga ndiye Tenzi wenyuwo uye kuti iye haana rusaruro.
 Kunyange zvangu ndikataura nendimi dzavanhu kana dzavatumwa asi ini ndisina rudo ndinongova dare rinorira kana makwakwakwa esimbi anorira. Kunyange ndiine chipo chokuporofita ndichinzwisisa zvakavandika zvose, ndiine ruzivo rwose; kunyange dai ndiine chitendero chakaperera chinosudurudza makomo asi ndisina rudo hapana zvandiri. Kunyange dai ndikagovera zvose zvandinazvo uye kunyange ndikapa muviri wangu kuti upiswe asi ndisina rudo hapana chandinowana. Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi. Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde. Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi. Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose. Rudo harumboperi. Kuporofita kuchapera; kutaura nendimi kuchaguma. Ruzivo ruchapfuura, nokuti ruzivo rwedu haruna kuzara. Kuporofita kwedu hakuna kuzara. Zvino kana chakazara chouya, chisina kuzara chiya chinobva chapera basa. Pandakanga ndichiri mwana muduku ndaitaura somwana muduku; ndaifunga somwana mudiki ndairangarira somwana muduku asi pandakazova murume mukuru ndakakanda pasi zvohwana huduku. Pari zvino tinoona muchiringiriro zvamadzerere. Asi mune ramangwana tichaonanazve uso nouso. Iye zvino ndinoziva zvishoma asi mune ramangwana ndichanyatsoziva sokunyatsozivikanwa kwandakaitwa. Saka chitendero nechitarisiro norudo zviripo zviri zvitatu, asi chikuru chazvo rudo.
 Zvino totiiko? Toramba tiri muchitadzo here kuti nyasha dzifashukire? Kwete, handizvo. Zvingaitike sei kuti, isu kuchitadzo, tiri vanhu vakafa, tirambe tichirarama machiri. Hamuzivi here kuti isu tose takaombekwa muna Kristu Jesu. Takaombekwa murufu rwake. Naizvozvo takavigwa pamwechete naye nokuombekwa murufu rwake kuti sokumutswa kwakaitwa Kristu kuvafi nembiri yaBaba isuwo tifambe muupenyu hutsva. Kana takabatana naye murufu rwaakaita serwake tichabatanawo naye mukumuka kwaakaita. Tinoziva kuti humunhu hwedu hwakare hwakarovererwa pamuchinjikwa pamwechete naye kuti muviri wezvitadzo uparadzwe uye kuitirawo kuti tirege kuva varanda vechitadzo nokuti munhu anenge afa atosunungurwa kuchitadzo. Asi kana takafa pamwe naKristu kudai tinodavira kuti tichararamawo pamwechete naye. Tinoziva kuti Kristu zvaakamutswa kuvakafa haachazofazve. Rufu haruchamutongazve. Nokufa kwaakaita, kuchitadzo, akava munhu akafa chakamwe asi upenyu hwake iye zvino anoraramira Mwari. Naizvozvo imiwo munofanira kuzviona kuti, kuchitadzo muri vanhu vakafa; asi Mwari ari iye upenyu hwenyu muna Kristu Jesu. Naizvozvo chitadzo ngachirege kukutongai mumiviri yenyu inofa chichiita kuti muteerere havi dzawo. Musape nhengo dzenyu kuti dzishandiswe kutadza semidziyo yokuita nayo zvakaipa asi zvipei kuna Mwari savanhu vakabviswa murufu vachiendeswa kuupenyu mupe nhengo dzenyu kuna Mwari semidziyo yokushandisa mune zvakarurama. Chitadzo hachizokutongai nokuti hamusi pasi pomutemo asi muri pasi penyasha. Ko zvino topara zvitadzo pamusana pokuti hatisi pasi pomutemo asi pasi penyasha here? Handizvo. Hamuzivi here kuti mukazviisa mumaoko omumwe munhu savaranda vanomuteerera, matova varanda vomunhu iyeyo wamunoteerera? Chingave chitadzo chamunoteerera chinosvitsa kurufu kana kuteerera kunotsvitsa mukururama. Asi tinotenda Mwari kuti, imi makambenge muri varanda vechitadzo, mava kuteerera nemwoyo wose chidzidziso chiri pamwero chamakazvipira kwachiri. Madaro kuzvisunungura kuchitadzo, makave varanda voururami. Tava kutaura zvedu savanhu, sezvinhu zvinongowanikawo muvanhu, pamusana poutera. Sezvamakambopa nhengo dzenyu kune zvetsvina uye nokuhuipi hwakaipisisa, saizvozvowo chipai nhengo dzenyu kune zvakarurama kuti muitwe vatsvene. Pamaiva varanda vechitadzo makanga makasununguka kuita zvakarurama noururami. Asi chii chamakawana muzvinhu izvozvo zvamavakutonyara nazvo. Mugumo wazvo rufu. Zvino zvamakasunungurwa muchitadzo mukava varanda vaMwari, mubayiro wamunowana kuitwa vatsvene. Uye mugumo wazvo upenyu usingaperi nokuti mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari chaanopa pachena upenyu husingaperi muna Jesu Kristu Tenzi wedu.
 Jesu paakapedza kutaura zvinhu izvi, akabva kuGarirea akaenda mudunhu reJudhea mhiri kwaJorodhani. Gurumwandira ravanhu rakamutevera akavaporesa ikoko. Zvino vamwe vaFarisei vakauya kwaari. Vakamuedza nokumubvunza vachiti, “Zvinobvumirwa here kuramba mukadzi wako pamusana pechikonzero chipi nechipi zvacho?” Jesu akavapindura achiti, “Hamuna kuverenga here kuti iye akavasika kubvira pakutanga, akavasika vari murume nomukadzi akati, ‘Nechikonzero ichochi murume achasiya baba naamai vake achiva akabatanidzwa nomukadzi wake.’ Vaviri ivavo vachiva nyama imwechete. Naizvozvo havachisiri vaviri asi vava nyama imwechete. Naizvozvo chinenge chabatanidzwa naMwari ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.” Ivo vakati kwaari, “Ko Mosesi akazoitirei kuti murume anofanira kupa mukadzi wake tsamba yokumurambisa nayo achibva amuramba.” Iye akati kwavari, “Pamusana pemwoyo yenyu yakaoma, Mosesi akakubvumirai kuramba vakadzi venyu. Asi kubvira pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Uye ini ndinoti kwamuri, ani naani anoramba mukadzi wake kunze kokunge aita upombwe achizoroora mumwe anoita upombwe.” Vadzidzi vakati kwaari, “Kana ari iwo mamiriro akaita zvinhu pane zvomurume nomukadzi zviri nani kusaroora.” Asi iye akati kwavari, “Havasi vose vanogona kuzvitambira izvozvo asi avo chete vanenge vakatozvipiwa. Nokuti kune vamwe vanoita utsvimborume kubvira chiberekerwo chavo. Vamwe vanoitiswa tsvimborume navanhu. Navamwewo vanosarudza kuva tsvimborume pamusana poumambo hwedenga. Uyo anokwanisa kugashira izvi ngaazvigashire.” Zvino vamwe vanhu vakauisa vana kuna Jesu kuti aise maoko ake pavari achivanamatira. Vadzidzi vakarambidza vanhu ivavo. Asi Jesu akati, “Regai vana vaduku vauye kwandiri musavarambidze nokuti umambo hokudenga ndehwevakaita saivava.” Akaisa maoko ake pamusoro pavo ndokubva aenda. Mumwe murume akauya kwaari achiti, “Mudzidzisi chii chakanaka chandingaite kuti ndiwane upenyu husingaperi?” Jesu akati kwaari, “Unondibvunzireiko kuti chakanaka chii? Akanaka ariko mumwechete. Kana uchida kupinda muupenyu, chengeta mitemo.” Iye akati, “Ipi yacho?” Jesu akati, “Inoti, usauraye, usaite upombwe, usabe, usaite uchapupu hwenhema. Remekedza baba naamai vako ugoda mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.” Jaya riya rakati kwaari, “Yose iyi ndakaichengeta. Chimwe chandisina chii.” Jesu akati kwaari, “Kana uchida kuva munhu akaruramisisa, enda undotengesa zvose zvaunazvo upe kuvarombo. Uchava noupfumi kudenga, ugouya wonditevera.” Jaya riya parakazvinzwa rakaenda rasuruvara nokuti rakanga riine zvinhu zvakawanda. Jesu akati kuna vadzidzi vake, “Zvechokwadi ndinoti kwamuri, ‘Zvichaoma zvikuru kuti mupfumi apinde muumambo hwedenga.’ Ndinotizve kwamuri, zvirinyore kuti nghamera ipinde napaburi retsono panokuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.” Vadzidzi pavakanzwa izvi vakashamiswa zvikuru vachiti, “Ko zvino ndiani angagone kuponeswa?” Jesu akavatarisa akati kwavari, “Kuvanhu, izvi hazvigoneki asi pana Mwari zvinhu zvose zvinogoneka.” Ipapo Pita akapindura achiti, “Tarisai muone, isu takasiya zvose tikakuteverai. Zvino tichawanei?” Jesu akati kwavari, “Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ‘Pakumutsurudzwa kwezvinhu patsva, Mwanakomana womunhu paanenge ogara pachigaro chake chembiri, imi makanditevera muchagarawo pazvigaro gumi nezviviri muchitonga madzinza gumi namaviri eIsiraeri. Munhu wose akasiya dzimba kana vakoma navanun'una kana hanzvadzi kana baba kana amai kana vana kana minda pamusana pezita rangu, achagamuchira zvakapetwa kazana uye achizowana upenyu husingaperi. Asi vazhinji vokutanga vachava vokupedzisira, vokupedzisira vachava vokutanga.’ ”
 Vatumwa vaMwari vaviri ava vakasvika kuSodhomu ava manheru. Roti akanga agere pasuo guru reSodhomu. Roti avaona akasimuka akandochingurana navo akavagwadamira pasi akatyora uso akati, “Madzishe angu, uyai zvenyu kumba kwangu ini muranda wenyu, mushambe tsoka dzenyu, murareko mozofumomuka zvenyu moenda.” Asi ivo vakati, “Kwete. Tichavata zvedu pamusika.” Roti akavateterera chaizvo kusvikira aenda navo kumba kwake, vakapinda mumba. Akavaitira mabiko akavabikira chingwa chisina mbiriso vakadya. Asi vasati vamborara, varume vomuguta iroro, varume muSodhomu vakuru navadiki, vanhu vose zvavo pasina akasara vakakomba imba iyi. Vakadaidzira kuna Roti vachiti, “Varume vauya kwauri manheru ano vari kupiko? Vaburitse pano panze kwatiri kuti tivaite vakadzi vedu.” Roti akaenda kumusuo akabuda panze kuvanhu ivavo ndokupfiga musuo. Akati, “Hama dzangu regai kuita chakaipa chikadai. Ndine vanasikana vangu vaviri vachiri mhandara. Regai ndivaunze kwamuri muite zvenyu zvamunoda navo. Kana zviri zvavarume ava regai zvenyu kuwana chamungaite kwavari nokuti vaeni vauya mumba mangu.” Asi ivo vakati, “Ibvapo.” Vakatiwo, “Muchinda uyu akauya somuuyi, asi zvino ava kuzvitora somutongi! Zvino tichakuorora kupfuura zvatanga tichavaita.” Vakamomotera Roti vachimusunda vachida kupaza musuo wemba yake. Asi varume vaviri vaya vakatambanudza maoko avo, vakakwevera Roti mumba mavakanga vari, vakapfiga musuo. Vakapofomadza vanhu vose vaya vakanga vari pamusuo wemba, vakuru navaduku, vakadzungaira zvokutadza kuona musuo iwoyo. Varume vaviri vaya vakabvunza Roti vachiti, “Une vamwe vokwako muguta rino here, vakaita savakuwasha, kana kuti vana vakomana kana vasikana, kana vamwewo? Vaburitse muno nokuti tava kuda kuparadza nzvimbo ino. Chatinodariro ndechichi: mhosva dzavanhu vayo dzasvika munzeve dzaTenzi, dzanyanya kuwanda zvokuti Tenzi atituma kuzoparadza.” Roti akabuda akandotaurira vakuwasha vake vaitarisirwa kuzoroora vana vake achiti, “Simukai mubve muno nokuti Tenzi achaparadza guta rino.” Asi vakuwasha vake vakafunga kuti vari kuita jee navo. Kuzoti ava mambakwedza vatumwa vakakurumidzisa Roti vachiti, “Chisimuka utore mukadzi wako navanasikana vako vaviri vaunavo pano uende, kuitira kuti murege kuparadzwa pacharangwa guta rino.” Asi Roti akaita chinono, varume ava ndokubva vati Roti nomukadzi wake navanasikana vake vaviri, maoko chapu, vakavaburitsa vachivakwekweretsera kunze kweguta nokuti Tenzi akavanzwira tsitsi. Pavakasvika navo kunze kweguta vakati, “Chitotizai muponese upenyu hwenyu, musacheuke muchitarisa shure kana kumira papi zvapo mubani. Tizirai kugomo mungadaro mukaparadzwa.” Asi Roti akati, “Kweteka, madzishe angu. Inga makafadzwa neni muranda wenyu wani mukandinzwira tsitsi dzenyu dzakawanda mukandinunura. Asi zvokutizira kugomo handingazvikwanise, njodzi ingadaro ikandiwira ndisati ndasvikako, ndikafa. Inga pane kaguta kari pedyo ako, handiti kadiki zvako, regai nditizireko ndirarame.” Mutumwa akati, “Zvakanaka, chichemo chako ndachinzwa. Chimwezve ndechokuti handichaparadza guta rawareva. Chikurumidza kutizira ikoko nokuti hakuna chandingaite usati wasvikako.” Saka zita reguta iroro rakatumidzwa kuti Zoari. Zuva rakanga ratobuda pakasvika Roti muZoari. Pakarepo Tenzi akanayisa moto wesarufa paSodhomu neGomora uchibva kudenga kuna iye Tenzi. Akaparadza maguta iwayo nebani rose navagari vomumaguta iwayo vose. Akaparadzawo zvose zvaimerapo. Asi mudzimai waRoti aivatevera ari shure, akacheuka akabva aita churu chomunyu. Abhurahamu akafumoenda paakanga amire naTenzi paya. Akatarisa kuSodhomu neGomora nokubani rose, onei utsi hwenzvimbo yose iyoyo huchitogoka mudenga soutsi hwevira romoto. Saka Mwari paakaparadza maguta omubani, akarangarira Abhurahamu, akaburitsa Roti mukati menhamo yokuparadzwa kwamaguta aaigara. Roti akazobva muZoari, akandogara mugomo, mubako, navanasikana vake vaviri vaya nokuti vakatya kugara muZoari. Mwana wavo wedangwe akataurira munun'una wake kuti, “Baba vedu vachembera uyezve hakuna varume munyika ino iyi vatingawanana navo sezvinongoitawo vanhu vose vose panyika. Ngatinwisei baba vedu waini tigorara navo kuti tiwane machengetero orudzi rurege kutsakatika.” Usiku ihwohwo vakanwisa baba vavo waini. Wedangwe akapinda muna baba vavo, akandovata navo. Baba ava havana kumboziva kuvata kwaakaita navo kana kuzobva kwaakaita pavari. Ramangwana racho, wedangwe akataurira munun'una wake achiti, “Ndakarara nababa usiku hwapfuura. Zvino ngativanwisei zvakare waini usiku hwanhasi, uendewo undorara navo kuti tiwane machengetero orudzi, rurege kutsakatika.” Usiku ihwohwo vakanwisazve baba vavo waini. Munun'una wacho akandorarawo navo. Baba ava havana kumboziva kuvata kwaakaita navo kana kuzobva kwaakaita pavari. Saka vanasikana vaRoti, vose vari vaviri, vakaita vana nababa vavo. Mwanasikana wedangwe akabereka mwana mukomana, akamutumidza zita rokuti Moabhu. Ndiye tateguru wevaMoabhu. Munun'una wake akaberekawo mwana mukomana, akamutumidza zita rokuti Bheniami. Ndiye tateguru wevaAmoni variko nhasi uno.